Kooxda Shabaabka oo soo riday Diyaarad ay Kenya leedahay | KEYDMEDIA ONLINE
Kooxda Shabaabka oo soo riday Diyaarad ay Kenya leedahay
Kismaayo (Keydmedia) - Kooxda Shabaabka ayaa goordhow sheegatay inay soo riday Diyaarad Dagaal oo ay leedahay dowladda Kenya kadib dagaal xooggan oo 24-kii saac ee la soo dhaafay si isdaba joog ah ugu soconaayay deegaanka Hoosingow ee galbeedka gobbolka Jubbada Hoose.
Dagaalkii shalay ka dhacay Hoosingow oo ahaa mid aad u xooggan ayaa waxaa siyaabo kala duwan uga hadlay warbaahinta kooxda Shabaabka oo guullo ka sheeganaayay waxaana warbaahinta Shabaabka lagu sheegay in Maleeshiyaadka Shabaabka ay dagaalkii shalay ku soo direed diyaarad nooca dagaalka ah oo ay Kenya leedahay.
Hadaba sheegashada Kooxda Shabaabka waxaa beeniyay oo waxba kama jiraan ku tilmaamay Militariga Kenya oo gaashaanka u daruuray hadalka ka soo yeeray Shabaabka.
Meleteriga Dawladda Kenya ayaa ka hadlay dagaalkii shalay iyaga iyo shabaab ku dhexmaray deegaanka Hoosingow ee galbeedka gobolka Jubbada Hoose.
Afhayeenka Meleteriga Kenya Major Emmuneal Chir Chir oo la hadlay Warbaahinta caalamka ayaa waxa uu sheegay in dagaalkii shalay ka dhacay deegaanka Hoosingow ay ku dileen 40-kamid ah Maleeshiyaadka Shabaabka.
“Dagaal ayaan ku qaaday fariisin ay shabaab ku lahaayeen meel 8-km u jirta Hoosingow, dagaalka waxaa nagu weheliyey Ciidamada Gaandi iyo diyaaradaheena dagaalka”, ayuu yiri Major Emmuneal Chir Chir.
Major Emmuneal Chir Chir oo la waydiiyay khasaaraha dhankooda ayaa waxaa uu yiri, “waxaan dilnay 40-kamid ah shabaabka, anaga dhankeena waxaa naga dhaawacmay 3-askari, Ciidamada Gaandi waxaa ka dhintay 6-askari, dhaawacana waa 3-askari”, ayuu yiri mar kale Major Emmuneal Chir Chir.
Warar xogg iyo xigasha wata kala soco www.Keydmedia.net